दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द,नेपालमा के होला ? - Kohalpur Trends
दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द,नेपालमा के होला ?
trendsminad April 11, 2021	No Comments
नयाँ दिल्ली । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सबै विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । केही दिनयता निरन्तर कोभिड संक्रमण दर बढेपछि यहाँका सरकारी तथा निजी विद्यालय अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
दिल्लीमा जस्तै भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि कोभिड संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेको छ । यसमध्ये महाराष्ट्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
संक्रमण दर बढेसँगै कतिपय राज्यले रात्रिकालीन कफ्र्यु जारी गरिसकेका छन् भने कतिपयले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न आदेश दिएका छन् । नयाँदिल्लीमा पनि गत मंगलबारदेखि रात्रिकालीन कफ्र्यु जारी भएको छ । कफ्र्यु आगामी ३० अप्रिलसम्म जारी रहनेछ । बिहीबार भारतमा एक लाख ३१ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएसंगै विद्यालयहरू बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
Previous Previous post: धरहराको उद्घाटन वैशाख ११ मा गर्ने तयारी
Next Next post: शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको डढेलो नियन्त्रणमा